Iimpazamo ezili-10 ze-Twitter | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 12, 2013 NgoLwesibini, Juni 11, 2013 Douglas Karr
Njengomntu olawula isiqingatha samashumi amabini eakhawunti zeTwitter (eyakho, incwadi, inkampani, ibhlog kunye noluntu), kufuneka ndingavumelani ne- # 8 kule infographic. Ndiyabathandabuza ooMkhosi oMkhosi wamanzi kum @vlad_umdali Iakhawunti ye-twitter ifuna ukuva malunga nokuBhloga ngokuBumbeneyo @iqosweb… Kwaye akukho mntu ufuna ukuva iingxelo zam zezopolitiko kwiakhawunti yam!
I-Twitter, njengalo naliphi na iqonga, yenye yeendlela zokunxibelelana nabanye abantu. Kwaye kukho iindlela ezithile ezingacetyiswa ngokungafanelekanga ze-Twitter kwaye iyasilela, ngelixa zisenokungathandabuzeki nokuba zitsale ku-Twitter, ziyingozi ngakumbi xa zisenziwa esidlangalaleni. Ke ukuba kunokwenzeka ukuba wenza nayiphi na kwezi mpazamo zili-10 zomgwebo (iswiti KwiDashBurst ukusebenzisana ne Uhlobo lweMaple) kwii-tweets zakho okanye ngakumbi ezitalatweni, nceda uyeke kwangoko!
Ndiyasibulela isicatshulwa esikhuthazayo samaxesha athile (# 7) ngenkuthazo ngokunjalo!
tags: ukuhlaIimpazamo ze-twitter
Juni 17, 2013 ngo-1: 07 AM
Andiboni gwenxa ngamanye amanqaku. Le yindlela abantu abaziphatha ngayo kubomi bokwenyani. kodwa abaziphathi ngale ndlela kuTwitter.
Juni 17, 2013 ngo-4: 01 AM
Enkosi ngokundinika ukholo lokuba abanye abantu bayakhutshwa kwezi ndlela zokuziphatha njengam! hehe ndiyavuma ndisenokuba mncinci kwaye ndenze curmudgeonly, kodwa andinako ngobomi bam ndibone ukuba kutheni abantu bengathathi ixesha lokuba bazazi ngakumbi malunga nezinye zezi zinto. Ukukhankanywa okukhethekileyo kufuneka kuye (ngenjongo ezintle) zokucaphula ezikhuthazayo ezonqulo lwazo kunye nenkunkuma endenza ukuba ndoyike xa kuvela kwisondlo.
Sep 24, 2013 kwi-6: 42 AM
Ukungavumelani ne- # 1 kunye # 7, wonke umntu usebenzisa i-Twitter ngezizathu ezahlukeneyo, kwaye abantu banokhetho lokungalandeli, kodwa iyonke iluluhlu oluhle
Sep 24, 2013 kwi-10: 07 AM
Ndiyavuma - kwaye andiluthandi naluphi na uluhlu lwe "mithetho" enikwe indlela oselula ngayo kwimidiya yoluntu.